एडिएसएलको सिस्टम सुधार, रिचार्ज कार्डबाट महसूल तिर्ने सुविधा सुचारु
काठमाडौं : पहिलोपोस्ट - | 28th October 2014 नेपाल टेलिकमले सिस्टम अपग्रेड गरेपछि एडिएसएल इन्टरनेटको महसूल पहिले जस्तै रिचार्ज कार्डबाट पनि गर्न सकिने भएको छ। टेलिकमले एडिएसएलको गति पनि पहिलेभन्दा सुधार हुने बताएको छ। टेलिकमले सोमबार सूचना प्रकाशित गर्दै गएको साउन ३१ गतेदेखि बन्द गरिएको यो सेवा फेरि सुरु भएको जनाएको हो। 'एडिएसएल सेवाको बिल भुक्तानीका लागि प्रयोगमा रहेको जिएसएम मोबाइल सेवाको रिचार्ज कार्ड तथा एमपिओएस प्रविधिको रिचार्ज सेवा केही समयदेखि बन्द रहेकोमा हाल परीक्षणको रुपमा सुरु गरिएको छ,' सूचनामा भनिएको छ। उपभोक्ताले रिचार्ज कार्ड र एमपिओएस पिनलेसबाट एडिएसएल इन्टरनेटको महसुल तिर्दा समस्या आएपछि नेपाल टेलिकमले यसको सिस्टम अपग्रेड गरिरहेको थियो।टेलिकमकी प्रवक्ता गुणकेशरी प्रधानले अहिले सिस्टम अपग्रेड भइसकेको बताइन्। तिहारअघि नै यो सेवा सुरु भएपनि परीक्षणको क्रममा रहेको उनले बताइन्। उनले भनिन्, 'अब सिस्टमले काम गर्न थालिसकेको छ। उपभोक्ताले सेवा लिन सक्छन्।' प्रधानले यो सिस्टम अपग्रेड गर्दा इन्टरनेटको गति पनि छिटो हुने बताइन्। उनले भनिन्, 'पुरानो सिस्टमले इन्टरनेटको गतिलाई पनि प्रभाव पारेको थियो। उपभोक्ताले पक्कै केही फरक पाउनु हुनेछ।' सिस्टम अपग्रेड गर्दा एडिएसएलको सेवामा समस्या आएर उपभोक्ता इन्टरनेट कहिले चल्ने कहिले बन्द हुने समस्याबाट हैरान भएका थिए।
किन बन्द भएको थियो रिचार्जबाट शुल्क भुक्तानी ?
टेलिकमका एक इन्जिनियरका अनुसार १४१३ डायल गरेर एउटै रिचार्ज कार्डले एडिएसएलको महसुल पनि तिर्न सकिने र मोबाइलमा पनि रिचार्ज गर्न सकिने भएपछि एडिएसएलको महसुल रिचार्जबाट गर्न नमिल्ने बनाइएको थियो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कात्तिक महिनामा जारी गरेको एमआइएस रिपोर्ट अनुसार देशभर एडिएसएलका ग्राहकको संख्या एक लाख १४ हजार छ सय ७३ जना छन्।
Posted by मेरो भनाई at 9:03 PM 1 comment:
टेलिकमले बागमती किनारामा हरियाली उद्यान बनाउने
३ कात्तिक, काठमाडौं । onlinekhabar.com नेपाल टेलिकमले बागमती नदीको कोटेश्वर पुलदेखि मनोहरा पुलसम्मको दुबैतर्फको किनारामा हरियाली उद्यान निर्माण गर्ने भएको छ । यस सम्बन्धमा अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिसँग सोमबार टेलिकमले सम्झौता गरेको छ ।
टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालय भद्रकाली प्लाजामा भएको सम्झौतामा टेलिकमका निमिक्त प्रबन्ध निर्देशक मधुसूदन कर्माचार्य र समितिका सदस्य सचिव राजेशप्रसाद सिंहले सम्झौता गरेका छन् ।
सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै टेलिकमा निमित्त प्रबन्ध निर्देशक कर्माचार्यले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बाग्मती नदीको स्वच्छता र सुन्दरता वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउन उद्यान निर्माण गर्न लागेको बताए ।
बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका सदस्य सचिव सिंहले कम्पनीको सहयोगका लागि धन्यवाद प्रदान गरे ।
टेलिकमले कोटेश्वर पुलदेखि मनोहरा पुलसम्मको ९ सय २० मिटर लम्बाइ र औषत ९ मिटर चौडाइको करिव १६ रोपनी क्षेत्रफलमा हरियाली उद्यान निर्माण गरी आगामी ५ वर्षसम्म सञ्चालन तथा रेखदेख गर्नेछ ।
टेलिकमले बाग्मती नदिको स्वच्छता र सुन्दरता वृद्धिका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग गर्दै आइरहेको छ । गत वर्ष दशौं वाषिर्कोत्सवको अवसरमा बाग्मती सफाई महाअभियानमा सरिक भई बाग्मती नदी सफाई गर्नुको साथै सफाइमा प्रयोग हुने विभिन्न सामग्रीहरु टेलिकमले प्रदान गरेको थियो ।
यसैगरी, बाग्मती सफाई अभियान सुरु भएको दोस्रो हप्तादेखि सर्वसाधारणलाई सफाई अभियानमा संलग्न हुन कम्पनीको तर्फबाट हरेक हप्ता एक लाख भन्दा वढी एसएमएस प्रेषित गरेर योगदान पुर्‍याउँदै आइरहेको छ ।
Posted by मेरो भनाई at 2:20 AM 1 comment:
नेपाल टेलिकमको चाडपर्व अफर, महसुलमा दश प्रतिशत छुट, ५० पैसामा एसएमएस, एडिएसएलमा भोल्युम थपियो
विजमाण्डु, काठमाडौँ ।
नेपाल टेलिकमले नेपालीको महत्वपूर्ण चाड दसैँ, तिहार र छठलाई केन्द्रित गरी आफ्नो सेवाअन्तर्गत विभिन्न छुट दिएको छ । टेलिकमकी प्रवक्ता गुणकेशरी प्रधानले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी टेलिकमको विभिन्न सेवामा छुट दिइएको बताएकी छिन् । विज्ञप्ति अनुसार टेलिकमले उपभोक्तालाई यही असोज १३ देखि २१ गते र कात्तिक चार देखि १३ गतेसम्म विभिन्न सेवामा छुटहरु दिएको छ ।
टेलिकमले जिएसएम र सिडिएमए सेवामा कम्पनीको नेटवर्कभित्र हुने कलको विद्यमान महसुल दरमा १० प्रतिशत छुट दिएको छ । यस अनुसार उक्त अवधिभित्र जिएसएम र सिडिएमए पोष्टपेड मोवाइलबाट प्रतिमिनेट ९० पैसा र जिएसएम र सिडिएमए प्रिपेड मोवाइलबाट प्रतिमिनेट एक रुपैयाँ ३५ पैसामा कल गर्न सकिनेछ ।
यसैगरी जिएसएम र सिडिएमए सेवामार्फत कम्पनीकै नेटवर्क भित्र हुने एसएमएस सेवाको विद्यमान महसुल दरमा ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराइएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । सो अवधिमा कम्पनीको नेटवर्कभित्र ५० पैसामा एसएमएस गर्न सकिनेछ ।
यस्तै पिएस्टिएन/ सीफोन सेवाका ग्राहकहरुलाई न्युनतम मासिक महसुल दुईसयमा एकसय ७५ स्थानीय कल निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेकोमा आश्विन र कार्तिक महिनामा एकसय स्थानिय कल थप गरी न्यूनतम मासिक महसुलमा कुल दुइसय ७५ कल निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ ।
भोल्युम बेस्ड एडिएसएल तथा वाइम्याक्स सेवाका ग्राहकहरुलाई पनि टेलिकमले अधिकतम तीन जिबी डाटा थप गरेको छ । दशैको अवधिमा असोज १३ देखि २० गतेसम्म भ्यालिडिटी सकिनेले मात्रै सो छुटको उपयोग गर्न सक्नेछन् । थप डाटाको भ्यालिडिटी समय २१ गतेसम्म कायम रहने टेलिकमले जनाएको छ । यसैगरी तिहार र छठपर्वको अवधि (मिति २०७१।०७।०६ देखि २०७१।०७।१२) मा भ्‍यालिडिटी समय सकिने ग्राहकहरुलाई समेत तीन जिबी डाटा थप गरिनेछ । उक्त थप डाटाको समायावधि कात्तिक १३ गतेसम्म कायम रहनेछ ।
यही असोज १४ देखि २१ गतेभित्र अनलिमिटेड एडिएसएल र वाइम्याक्स अकाउन्टको समायावधि समयावधि समाप्त हुने ग्राहकहरुको समयावधि मिति असोज २२ सम्म तथा कात्तिक ६ देखि कात्तिक १२ भित्र एडिएसएल र वाइम्याक्सको समयावधि समाप्त हुने ग्राहकहरुको समयावधि मिति १३ गतेसम्म थप गरिएको छ ।
सिडिएमए सेवाका ग्राहकहरुलाई असोज ९ देखि २१ सम्म तथा कात्तिक ४ देखि १३ गतेसम्म प्रत्येक रिचार्जमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म बोनस उपलब्ध गराएको छ । यसअनुसार उक्त अवधिभित्र प्रत्येक २०० रुपैयाँको रिचार्ज गर्दा २० र पाँचसय रुपैयाँको रिचार्ज गर्दा ७५ तथा एकहजार रुपैयाँको रिचार्ज गर्दा दुईसय रुपैयाँ बोनस उपलब्ध दिइने टेलिकमले जनाएको छ । सो बोनसको भ्यालिडिटी पिरियड क्रमशः एक र दुईदिन कायम रहनेछ ।
Posted by मेरो भनाई at 10:25 AM 1 comment:
नेपाल टेलिकममा इन्जिनियरको अान्दोलन फिर्ता, व्यवस्थापनसँग नाै बुँदे सहमति
काठमाडौं । अबदेखि प्रबन्ध निर्देशक आन्तरिक खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने लगायतका नौ बुँदामा व्यवस्थापन र आन्दोलनरत कर्मचारीहरुबीच सहमति भएपछि तीन सातादेखि नेपाल टेलिकममा चलिरहेको आन्दोलन सकिएको छ।
गैर प्राविधिक कर्मचारीलाई नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाएको विरोधमा आन्दोलनरत इन्जिनियरहरु र सञ्चार सचिव तथा कम्पनी अध्यक्ष सुनिलबहादुर मल्लबीच नौ बुँदामा सहमति गरिएको संघर्ष समितिका संयोजक दिनेशचन्द्र पन्थीले पहिलोपोस्टलाई बताए। सहमति भएका बुँदा छ महिनाभित्र कार्यान्वयन नभए फेरि आन्दोलन थाल्ने चेतावनी पन्थीले दिए।
गैर इन्जिनियरलाई कम्पनीको प्रमुख बनाएको भन्दै कम्पनीका इन्जिनियर समूहले आन्दोलन गर्दै प्रबन्ध निर्देशकको कार्यकक्षअगाडि धर्ना दिँदै आएका थिए। सरकारले गत भदौ १९ गते कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकका कम्पनीकै सचिवालयमा नायब प्रबन्ध निर्देशक रहेका आचार्यलाई प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो।
के- के भयो सहमति ?
पन्थीका अनुसार 'अबदेखि प्रबन्ध निर्देशक हुँदा खुला प्रतिस्पर्धाबाट गराउने सहमति भएको छ।' टेलिकममा अहिलेसम्म खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएका छैनन्।
आन्तरिक संस्थागत सुधारका विषय पनि सहमतिमा समेटिएको उनले जानकारी दिए।
सहमतिमा एकचोटी प्रबन्ध निर्देशक भइसकेका कर्मचारी पुनः नायब प्रबन्ध निर्देशकमा काम गर्न नपाइने पनि उल्लेख छ।
यसैगरी आन्तरिक रुपमा नै टेक्निकल अडिट हुनुपर्ने माग राखिएको विषयमा पनि सहमति भएको छ। पन्थीका अनुसार अब नेपाल टेलिकमले अब कुनै सामान खरिद गर्दा टेक्निकल अडिट गर्नैपर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ।
आन्तरिक लेखापरीक्षणले पटक-पटक टेक्निकल अडिट गर्नैपर्ने सुझाव दिए पनि पूर्व एमडी तथा व्यवस्थापकहरुले यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका थिए। टेक्निकल अडिट नगरिने हुँदा पूर्व एमडीहरुले आफ्नै सिस्टम राख्ने, आफैं सञ्चालन गर्ने र आफैं अप्रुभ गर्ने गर्थे।
Posted by मेरो भनाई at 10:21 AM No comments:
टेलिकम कर्मचारीबीच झडप, कार्यालयका कुर्सी र सिसा तोडफोड, दसैंतिहार योजना अनिश्चित बन्यो
काठमाडौं। नेपाल टेलिकममा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तीको विवादले कर्मचारीबीच नै झडप भएको छ। अप्राविधिकलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाएको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका इन्जिनियर र आन्दोलनको विपक्षमा रहेका अप्राविधिक कर्मचारीबीच बुधबार झडप भएको हो। आन्दोलनका कारण दसै पेश्की र उपभोक्तालाई सेवामा छुट दिन समेत नसकेको भन्दै अप्राविधिक कर्मचारीले आन्दोलनको विरोध गरेपछि दुई पक्षबीच झडप भएको हो। सुरुमा कर्मचारीहरु भनाभनमा उत्रिए र त्यसपछि हात हालाहालसम्मको अवस्था सिर्जना भयो। कर्मचारीहरुले प्रबन्ध निर्देशकको कार्यकक्ष बाहिरको सिसा फुटाएका थिए भने केही कुर्सी पनि भाँचेका छन्। बुधबारको घटनाले प्राविधिक र अप्राविधिकबीचको दुरी थप बढाएको छ। टेलिकिममा सात सयको हाराहारीमा प्रावधिक र २१ सयको हाराहारीमा अप्राविधिक कर्मचारी छन्। गत साउन १९ गते सरकारले टेलिकमका १५ नायवप्रबन्ध निर्देशकमध्ये एघारजना प्राविधिक समूहको हुँदा गैरप्राविधिक व्यक्तिलाई प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको भन्दै इन्जिनियरले विरोध गरिरहेका छन् । प्राविधिकले गैरप्राविधिक व्यक्तिलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर सरकारले आफूहरूलाई अपमान गरेको ठानेका छन् । यही विरोधले टेलिकम कर्मचारी विभाजित भएका हुन् । विरोधमा उत्रिएका इन्जिनियरहरुले एमडी प्राविधिक९इन्जिनियर० क्षेत्रकै हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरेपनि टेलिकमको विनियमावलीमा एमडी प्राविधिक नै हुनपर्ने कतै उल्लेख छैन ।
Posted by मेरो भनाई at 10:59 AM 1 comment:
प्राविधिक र अप्राविधिकको विवाद उत्कर्षमा, दसैं अफर घोषणा गर्न समेत कठिन, डर टेक्निकल अडिटको
नेपाल टेलिकमका इन्जिनियरहरु बिहान १० बजे कार्यालय पुग्छन् । आफ्नो कार्यकक्षमा जान्छन् । हाजिर गर्छन् र ११ बजेपछि प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) बुद्धिप्रसाद आचार्यको कार्यकक्ष अघि भेला हुन्छन् ।
पाखुरामा कालोपट्टी बाँधेर टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालय भद्रकालीको दोस्रो तलामा टेलिकम बचाउ अभियान भन्दै हाते माइकमार्फत् आन्दोलनका भाषण गर्छन्, एमडी विरोधी नाराबाजी गर्छन् र एमडीको राजीनामा माग्छन् ।
राजीनामा नदिए टेलिकमका सबै सेवा अवरुद्ध पार्ने चेतावनी दिन्छन् । बेलुकी ५ बजेपछि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने भन्दै आआफ्नो घर फर्कन्छन् ।
टेलिकममै कार्यरत प्रशासन-लेखातर्फका कर्मचारी पनि १० बजे अफिस आउँछन् । पाखुरामा न कालो पट्टी लगाउँछन् । न त आन्दोलनमा सहभागी हुन्छन् । न त आन्दोलनका बारेमा चासो नै राख्छन् र एमडीको विरोध गर्छन् । बरु हप्तौदेखिको आन्दोलनले संस्थालाई पारेको असर र इन्जिनियरहरुको व्यवहारले कर्मचारीबीचको एकता टुट्ने र संस्थानै डुब्ने डरले भयवित देखिन्छन् ।
उनीहरु आफ्नो काम गर्छन् । काम नभए कार्यकक्षमै कम्प्युटर चलाउँछन् । फेसबुक खोल्छन् । अरु समाचार साइट हेर्छन् र बेलुकी घर फर्कन्छन् । आन्दोलनतिर टाउको फर्काएर समेत हेर्दैनन् ।
अहिले नेपाल टेलिकमका प्राविधिक (इन्जिनियर) र प्रशासनका कर्मचारीको दैनिकी हो यो ।
सरकारले गत साउन १९ गते टेलिकमका नायवप्रबन्ध निर्देशकमध्ये वरिष्ठ तहमा रहेका आचार्यलाई प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्ति गरेपछि कर्मचारीमा आएको विभाजनले टेलिकमको भविष्य कता ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
टेलिकमको प्रशासन तर्फका एक कर्मचारीका अनुसार अहिले इन्जिनियर र प्रसाशनका कर्मचारीबीच बोलचाल समेत बन्द हुने अवस्था आइसकेको छ । ती कर्मचारी भन्छन्, 'इन्जिनियरहरु प्रशासनका कर्मचारीलाई बुद्धिको मान्छे देख्छन् । हामीले उहाँहरुलाई विरोधी । दुई समूहमा बाँडिए जस्तै भएको छ टेलिकम । जुन कम्पनीको लागि हितकर छैन ।'
Posted by मेरो भनाई at 10:58 AM 1 comment:
असारभित्र ७५ जिल्लामै थ्रिजी पुर्याएर डाटा प्याकेज ल्याउँछाैं(अन्तरवार्ता)
२०७१ जेठ १८ गते ९:१७ मा प्रकाशित, onlinekhabar.com
अनुपरञ्जन भट्टराई नेपाल टेलिकममा प्रबन्ध निर्देशक भएको ४ महिना बितिसकेको छ । सुरुदेखि नै उनको जोड भ्वाइसभन्दा डाटा सेवातिर बढि देखिएको छ । यो चार महिनाको अबधिमै उनले निःशुल्क वाईफाई सेवा बिस्तार गर्नेदेखि डाटा सेवालाई आक्रामक बनाइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा टेलिकमको डाटा सेवा विस्तार तथा आगामी रणनीतिका बारेमा प्रबन्ध निर्देशक भट्टराईसँग अनलाइनखबरका लागि नविन अर्यालले गरेको कुराकानी:
नेपाल टेलिकममा तपाई प्रबन्ध निर्देशक भएको ४ महिना भइसकेको छ । यस अवधिमा तपाईले विशेष जोड दिएका ग्राहकमुखी योजनाहरु के–के हुन् ?
एक वर्ष अगाडी देखि मैले दूरसञ्चार कम्पनीहरुको फोकस अब इन्टरनेट डाटा बिजनेशमा हुनुपर्छ भन्दै आएको छु । अहिले भ्वाइस सेवाको कभरेज झण्डै देशभर भइसकेको अवस्था छ । अधिकांश नेपालीहरुको हातमा मोबाइल पुगिसकेको छ । त्यसैले हामी अब हामी डाटा सेवाका ग्राहक बढाएर डाटा बिजनेशतर्फ बढी केन्द्रीत हुनुपर्छ । अहिले हाम्रो टिम डाटा सेवालाई प्रभावकारी बनाएर अगाडी बढ्ने कसरतमा लागेको छ । मेरो चार महिनाको उपलब्धी हेर्ने हो भने वाईफाई सेवा ३० जिल्लासम्म पु¥याईसक्यौं । यहि आर्थिक वर्षभित्रमा ७५ वटै जिल्लाका सदरमुकाम र मूख्य मूख्य व्यापारीक केन्द्रहरुमा पु¥याउँछौं । यहि आर्थिक वर्षभित्रमै फाइवर टु होम योजना पनि सुरु गर्छौं । यो चाहीँ काठमाडौंका मूख्यमूख्य स्थानमा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा सुरु गर्दै छौं । हाम्रा ग्राहकहरुको चाहना हाइस्पिड डाटा हो । विकसित मुलुकहरु एउटा वेबसाइट २ सेकेन्डभित्र खुल्नुपर्छ भन्ने स्टान्डर्डमा गइसकेका छन् । हामीले पनि ग्राहकलाई एकदमै द्रुत गतिको डाटा सेवा दिने हो भने फाइवरको विकल्प छैन । हामीले वारलेसबाट त्यति छिटो सेवा दिन सक्दैनौं । हामीले सहरी क्षेत्रमा फाइवरमा जानै पर्छ । तत्काल काठमाडौं उपत्कामा सुरु गरेर आगामी आर्थिक वर्षभित्र देशका मूख्य शहरहरुमा फाइवर सेवा सुरु गर्ने हाम्रो योजना छ ।
Posted by मेरो भनाई at 10:06 PM 1 comment:
Posted by मेरो भनाई at 12:17 AM 1 comment:
Posted by मेरो भनाई at 4:20 AM 1 comment:
सरस्वती ढकाल, कारोबार दैनिक काठमाडौं, ५ जेठ- सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम नाफावृद्धिको अनुपात बर्सेनि
खस्किँदै गएको छ । गत वर्ष (०६९÷७०) सुरुका ९ महिनामा ८ अर्ब ४९ करोड खुद नाफा कमाएको टेलिकमले चालू वर्षको यही अवधिमा ८ अर्ब ६० करोडमात्र नाफा गरेको छ । यो १.२७ प्रतिशतमात्र वृद्धि हो । वार्षिक रूपमा हेर्ने हो भने अवस्था अझै दयनीय छ । आव ०६५÷६६ मा २८.०८ प्रतिशतको वृद्धि देखेको टेलिकम ०६९÷७० सम्म आइपुग्दा –२.६७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । ०६५÷६६ पछि ०६७÷६८ मा मात्रै १२.५३ प्रतिशतको वृद्धि छ । ०६६÷६७ मा ५.८९ प्रतिशतको वृद्धि छ भने ०६८÷६९ मा आउँदासम्म –४.२९ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्म टेलिकमले २९ अर्ब १२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ कारोबार गरेको छ । ०६९÷७० का ९ महिनामा २७ अर्ब ५६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ थियो । यो अवधिमा १७ अर्ब ६१ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गत आवको सोही अवधिभन्दा यो वर्ष लाइसेन्स नवीकरण शुल्क र कर्मचारीको तलब वृद्धि भएकाले नाफा उल्लेख्य बढ्न नसकेको कम्पनी प्रवक्ता गुणकेसरी प्रधानले बताइन् । “तलबसँगै कार्यसम्पादन, मर्मतसम्भार, नयाँ प्रविधि, उपत्यकाबाहिर बीटीएस जडानमा खर्च बढेको छ, आम्दानीअनुसार फ्रिक्वेन्सी शुल्क र रोयल्टी पनि बढेको छ,” उनले भनिन् ।
दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीले १९ अर्ब ६९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दा ५ अर्ब ५९ करोड २६ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । ३ महिनामा नाफा ३ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । चालू आवमा सरकारलाई २१ अर्ब ३५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाउने उसको प्रक्षेपण छ । त्यस्तै, करपछिको मुनाफा ११ अर्ब ९६ करोड २५ लाख रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण पनि उसको छ । कम्पनीले ९ महिनामा सेवाबाट २६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ र ब्याज तथा अन्य अम्दानीबाट २ अर्ब आम्दानी गरेको छ । गत वर्षको सोही समयमा यस्तो आम्दानी क्रमशः २५ अर्ब २७ करोड र २ अर्ब रुपैयाँ थियो । कम्पनीले साधारण टेलिफोन, जीएसएम मोबाइल, सीडीएमए, एडीएसएल, वाईम्याक्स, ईभीडीओ तथा अन्तर्राष्ट्रिय÷अन्तर्देशीय गरी दर्जनभन्दा धेरै सेवा विस्तार गरेको छ । टेलिकमले चालू आवमा करिब २९ लाख थप टेलिफोन वितरण गर्ने योजना बनाएको छ । जीएसएमतर्फ २० लाख, सीडीएमएतर्फ ८ लाख र साधारण टेलिफोनतर्फ २७ हजार लाइन वितरणको लक्ष्य राखिएको प्रवक्ता प्रधानले बताइन् । टेलिकममा ९१ प्रतिशत सेयर सरकार, ०.०३ प्रतिशत नागरिक लगानी कोष, ३.९७ सर्वसाधारण र ४.५ प्रतिशत टेलिकम कर्मचारीको हिस्सा छ । उसको चुक्ता पुँजी १५ अर्ब रुपैयाँ छ ।
Posted by मेरो भनाई at 11:57 PM 1 comment:
वर्ष दिनमा देशैभर थ्रीजी सेवा, टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक भट्टराईसँगको अन्तर्वार्ता
नेपाल टेलिकम सरकारी स्वामित्वका अन्य सस्थान र कम्पनीको तुलनामा सफल मानिन्छ, नाफा धेरै छ, सरकारलाई गैह्रकर राजस्व र नाफा सर्वाधिक बुझाउँछ । तर, गुणस्तरमा भने उपभोक्ताको निकै ठूलो गुनासो छ । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक अनुपरञ्जन भट्टराईलाई बिजमाण्डू सम्पादक सरोज काफ्लेले सोधे बार्षिक अर्बौ नाफा कमाउने कम्पनीमा गुणस्तरमा सँधै किन समस्या ?
नेपालका सफल संस्थानहरुको नाम लिनुपर्दा पहिलादेखि नै नेपाल टेलिकम नाम आउँथ्यो, कम्पनीको वित्तीय अवस्था पनि निकै राम्रो देखिँदै आएको छ । तर, अहिले पहिलाको जस्तो अब्बल गति देखिन छोडको छ, चालु आर्थिक वर्षको पुषसम्मको नाफा बृद्धिदर हेर्ने हो भनेपनि अब अगाडि जान केही बाधा देखिएको हो ?
ग्रोथरेट कम हुनुमा एउटा कारण अब हाम्रो अब हाम्रो मार्केट भ्वाइस स्याचुरेट हुने तिर गइसक्यो । त्यही भएर पनि नयाँ ग्राहक बनाउन पहिले जस्तो सकिँदैन । सबैको हातमा मोबाइल पुगिसक्यो । त्यसैले गर्दा ग्राहकको ग्रोथरेट कम देखिएको हो । अब आर्थिक रुपमा भने हामीले अरु नयाँ सेवा र ग्राहक ल्याएर नाफा बढाउनु पर्ने देखिन्छ । मोबाइलको भ्वाइस र एसएमस बाट मात्रै हाम्रो नाफा बढ्न सक्दैन ।
अब तपाईंहरु जाने भनेको डाटा हो । डाटालाई धेरै कुराले सपोर्ट गर्नुपर्छ । डाटा कति क्वालिटीको छ, कति छिटो चल्छ भन्ने पनि ग्राहकले हेर्छन् । तर त्यसमा त भ्वाइसमा जति छिटो प्रोग्रेस गर्नु सक्नु भएको छैन ?
डाटामा अब एउटा समस्या त डिभाइसको भयो । डिभाइस चाहिँ ८/१० हजार पर्छ । आठ हजार भन्दा कममा एउटा स्मार्ट फोन पाइँदैन । डाटा चलाउने ग्राहकलाई त स्मार्टफोन नभइ भएन । फिचर फोनबाट त डाटा धेरै कम चलाउन सकिन्छ । त्यसैले एउटा त स्मार्टफोनको पेनिट्रेसन बढाउनु पर्‍यो । त्यसपछि लिट्रेसीको कुरा गर्दा मेरो विचारमा स्मार्टफोनमा आइकनहरु हुने भएकोले इलिट्रेट मान्छेले पनि हेरेर गर्न सक्छन् । जस्तै भाइवरमा फोटो हेरेर पनि मान्छेले कुरा गर्न सक्छन् । त्यसैले लिट्रेसीले धेरै असर नपार्ला । मुख्यचाहिँ बाइङ पावर बढाउनुपर्छ । अब स्मार्टफोन भनेको कम्युनिकेसनको लागि बाहेक एउटा टुल पनि हो । त्यसैले हामीले धेरै खालको एपहरु अथवा कन्टेन्टहरु बनाउनु पर्यो, जसले गर्दा ग्राहकहरु डाटा युज गर्न आकर्षित हुन्छन् ।
तपाईको जवाफ अनुसार त सहरी उपभोक्ता नै अझै पनि मुख्य टार्गेट हुन् भन्ने देखिन्छ ?
सहरी पनि हुन् र गाउँमा पनि हाम्रो आफ्नै युनिभर्सल कम्युनिकेसन सर्भिस सुरु गर्न लागेका छौँ । त्यो चाहिँ भाइवर, फेसबुक, स्काइप सबै मिलाएर हो । त्यो भयो भने गाउँका मान्छेलाई पनि आफन्तसँग मुखै हेरर कुरा गर्न पनि सजिलो हुन्छ । र, नेपाल टेलिकमका ग्राहकलाई हामी मासिक प्याकेजमा सस्तोमा त्यो प्रयोग गर्न दिन्छौँ । त्यसले गर्दा म्यासेज आदानप्रदान गर्न एसएमएस भन्दा सस्तो पर्छ ।
Posted by मेरो भनाई at 1:44 AM2comments:
टेलिकमले आगामी एक महिनासम्म छुट दिने, CDMA नाइट प्याकेज र GSM सिम खरिदको छुट यथावत
काठमाडौं । bizmandu.com नेपाल टेलिकमले १० औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा गत माघदेखि तीन महिनाको लागि दिएको छुट थप एक महिनाका लागि दिने भएको छ । कम्पनीकै नेटवर्क भित्र हुने कल छुटलाई निरन्तरता दिइएको टेलिकमले जनाएको छ । सिडिएमए नाइट प्याकेज र जिएसएम, सिडिएमए पोष्टपेडको नयाँ सिम खरिदको छुटलाई निरन्तरता दिइएको छ । टेलिकम प्रवक्ता गुणकेशरी प्रधानका अनुसार वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर तीन महिनाको लागि सिडिएमए मोबाइलबाट राति कल गर्दा दिइएको छुट आगामी जेठ २३ गतेसम्मलाई निरन्तरता दिइएको हो । उनले भनिन्, ‘सिडिएमएबाट नेपाल टेलिकमको नेटवर्क भित्र कल गर्दा जम्मा २० रुपैयाँमा लिइने गरेकोमा अब एक महिनाका लागि यो सुविधा थप गरिएको छ ।’ टेलिकमले राति १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म नाइट प्याकेज दिँदै आएको छ । यसैगरी टेलिकमले सिडिएम र जिएसएम पोष्टपेड किन्दा लिँदै आएको १४ सय ३० रुपैयाँलाई बढाएर पन्ध्र सय १० रुपैयाँ बनाइएको छ । टेलिकमले छुट दिनु भन्दा अघि सिडिएएम र जिएसएम पोष्पेडको नयाँ सिम किन्दा २१ सय पर्थ्यो । प्रवक्ता प्रधानले भनिन् , ‘हामीले उपभोक्ताको मागलाई ध्यान राखेर पोष्टपेडको नयाँ सिम लिँदा पुरानै मूल्यमा फर्केनौँ । डिस्काउन्टलाई निरन्तरता दिँदै १५ सय १० रुपैयाँ बनाएका छौं ।’ टेलिकमले अन्य छुटलाई सोमबारदेखि नै लागु हुनेगरी निरन्तरता दिएको जनाएको छ ।
कम्पनीकै नेटवर्क भित्र हुने कल छुटलाई निरन्तरता दिइएको टेलिकमले जनाएको छ । छुटमा
फ्रेन्डस् एन्ड फेमिली सेवा वापत सिडिएमए पोष्टपेड मोबाइलको लागि प्रतिमिनेट ५५ पैसा
सिडिएमए प्रिपेडका लागि प्रतिमिनेट ७५ पैसा
बोल्न र सुन्न नसक्ने व्यक्तिहरुका लागि विक्री वितरण गरिएको सिम र रिमबाट कम्पनीकै नेटवर्कमा एसएमएस गर्दा प्रति एसएमएस वापत २० पैसा
महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको लागि ल्याइएको विशेष प्याकेज अन्तर्गत वितरण गरिने सिम र रिमबाट कम्पनीकै नेटवर्कभित्र हुने प्रत्येक १० मिनेट कलको १ रुपैयाँको दरले आगामी १ वर्षसम्म बोनस वितरण गरिने
इभिडियो सेवाको समयावधी समेत थप गरेको छ । २५ एमबी तथा ३ सय एमबी डाटा प्याकेज क्रमश: २ दिन र १५ दिन भित्र चलाइक्नुपर्ने, ३ सय एमबीको १५ दिनको लागि १ सय ३०, ५ सय एमबीको १ महिनाको लागि दुई सय, दुई जिबीको २ महिनाको लागि ७ सय ६० र ५ जिबीको २ महिनको लागि १ हजार सात सय र १० जिबीको २ महिनाको लागि २४ सय शुल्क तोकिएको टेलिकमले जनाएको छ ।
Posted by मेरो भनाई at 10:44 PM 1 comment:
एडिएसएलको सिस्टम सुधार, रिचार्ज कार्डबाट महसूल तिर...
नेपाल टेलिकमको चाडपर्व अफर, महसुलमा दश प्रतिशत छुट...
नेपाल टेलिकममा इन्जिनियरको अान्दोलन फिर्ता, व्यवस्...
टेलिकम कर्मचारीबीच झडप, कार्यालयका कुर्सी र सिसा त...
प्राविधिक र अप्राविधिकको विवाद उत्कर्षमा, दसैं अफर...